रुसी सेनाको आक्रमणमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की मारिए के हुन्छ ? अमेरिका यसो भन्छ… — Imandarmedia.com
रुसी सेनाको आक्रमणमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की मारिए के हुन्छ ? अमेरिका यसो भन्छ…
वासिङ्टन। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज १२ दिन पुग्दैछ। रुसी आक्रमण रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। यसबीचमा आइतबार अमेरिकी टेलिभिजन सीबीएसले अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनसँग रुसी आक्रमणमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की मारिएको खण्डमा के हुन्छ? भनेर प्रश्न गरेको थियो।
जवाफमा ब्लिंकेनले भनेका थिए कि त्यस्तो अवस्था आएमा युक्रेनको सरकारसँग आकस्मिक योजना छ।उनले भनेका छन्,‘युक्रेनसँग यसको विषयमा योजना छ। म यो विषयमा विस्तारमा बताउन गइरहेको छैन। जसरी पनि त्यहाँ सरकार रहिरहन्छ।’
रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको पहिलो हप्ता राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफूलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनले मार्न चाहेको बताएका थिए। यद्यपी रुससँग आफूले आत्मसमर्पण नगर्ने र देश छाडेर नभाग्ने उनले अडान लिएका थिए।
अमेरिकाका अनुसार युक्रेन रुससँग झुक्दैन र त्यहाँका राष्ट्रपति मारिए पनि नयाँ सरकारले रुसका प्रतिकार गरिरहन्छ। यता रुसले युक्रेनमा सर्वसाधारणहरुलाई निशाना बनाएको युक्रेन सरकारले बताएको छ। रुसले अस्पताल, नर्सरी र विद्यालयमा हमला गरेको युक्रेनका उपप्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
युक्रेनी सेनाको कठोर प्रतिकारपछि रुसी सेनाले सर्वसाधारणमाथि ठूलो सैन्य कारबाही गरेको उपप्रधानमन्त्री ओलहा स्टेफानिसाइनाले बताए।आइतबार मात्र रुसी सेनाको गोलाबारीमा परेर इरपिनमा एकै परिबारका चार जना मारिएका थिए। उनीहरु युद्धग्रस्त इरपिनबाट सुरक्षित क्षेत्रतर्फ भाग्ने क्रममा मारिएका थिए।
त्यस्तै मारिओपोल सहरमा सामूहिक उद्दार कार्य स्थगित भएको छ। मारिओपोल सहरमा पाँचौँ दिन पनि पानीको हाहाकार देखिएको छ। त्यहाँ उर्जा, खानेकुरा र पानी अभाव देखिएको बताइएको छ।
रुसको शृंखलाबद्ध गोलाबारीका कारण सर्वसाधारणलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ सार्ने योजना स्थगित भएको जनाइएको छ। तर, रुसले यसको दोष युक्रेनी फौजलाई लगाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य केन्द्रहरुमाथि हमला भइरहेका बताएको छ। रुसी सेनाले घनाबस्ती भएको स्थानमा निशाना बनाएको बेलायत सरकारले आरोप लगाएको छ।
आइतबार राष्ट्रसंघको अनुगमनकर्ताहरुका अनुसार रुसी सेनाले २४ फेब्रुवरीमा युक्रेनमा हमला गरेपछि ३६४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। तर, वास्तविक तथ्यांक सोभन्दा बढी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोग युएनएचसीआरका अनुसार रुसी सेनाले हमला गरेपछि मात्र १५ लाख युक्रेनीले देश छोडेका छन्।तर, रुसले सर्बसाधारणलाई निशाना नबनाइएको बताउँदै आएको छ। आफ्नो विशेष सैन्य कारबाही युक्रेनी राष्ट्रबादी र नवनाजीविरुद्ध भएको रुसी तर्क छ।
रुसमाथि प्रतिबन्धै प्रतिबन्ध : रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्नु अगाडि लिडीया एक अन्तर्राष्ट्रिय आइटी कम्पनीमा कार्यरत थिइन्। अहिले रुस बाहिर काम गर्ने सबै कर्मचारी हटाइएका छन्। १ सय जना अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, १ सय जना रुसमा तथा १ सय जना युक्रेनमा काम गर्ने गरेका थिए। ‘मेरै कति साथीहरू काम छाडेर देशको स्वतन्त्रताका लागि बन्दुक बोकेर हिँडेका छन्,
गत साता केन्द्रीय बैंककी प्रमुख एलभीर नबियुलीनाले देशको आर्थिक अवस्था खराब बनेको सूचना दिएकी थिइन्। यो सूचनासँगै रुसी मुद्राको मूल्य गिरावट रोक्नकै लागि ब्याजदरमा व्यापक वृद्धि गरिएको थियो।
यसरी ब्याजदर २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। सन् २०१० मा इरान र सन् २०१३ मा उत्तर कोरियामा लगाइएको नाकाबन्दी भन्दा अहिलेको नाकाबन्दी अझ बढी कठोर छ। यसको असर चौतर्फी छ।
अहिलेको युक्रेनको आक्रमणका कारण रुसको आर्थिक अवस्था तहस नहसको क्रममा त छ नै यसले त्यहाँका नागरिकले पनि अकल्पनीय दुःखको सामना दिन पनि आउन सक्नेछ।
युद्धको सबैभन्दा कटु सत्य यो हो कि युद्धरत दुवै पक्षले केही न केही दुख र सास्ती बेहोर्नै पर्छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण युक्रेनी मात्र होइन, रुसी जनताको जीवनमा पनि धेरै दुख थपिएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा